XUDEYFA BINU AL-YAMAAN
"XUDEYFA WUXUU IDIIN SHEEGO RUMEYSTA".
"Haddaad doonto waxaad ka mid noqotaa muhaajiriinta, sidoo kalena haddaad doonto waxaad ka mid noqotaa Ansaarta, labadaas kooxood midkaad doontid naftaada u dooro”, hadaladaa Waxaa Xudeyfa ku yiri Rasuulka (scw) markii ugu horeysay ee uu magaalada Makka kula kulmay. Sababta keentay kala doorashadaas ee uu Rasuulka (scw) kala dooransiiyay labadaas kooxood ee sharafta badan ayaa waxaa ku dhex jirta sheeko xiiso leh oo aan ku arki doono gudaha sheekada.
Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa Xudeyfa u socdaalay magaalada Makka si uu u soo arko Rasuulka (scw), markii uu la kulmayna isla markiiba wuxuu weydiiyay su’aashan: ”maadaama aan ka imid magaalada Madiina, ma muhaajir baan ahay, mise Ansaari Rasuulkii Alloow?”. Rasuulka (scw) wuxuu ku yiri: ”haddaan doonto waxaad noqotaa muhaajir, haddaad doontana waxaad noqotaa ansaari, naftaada u door wixii aad la jeceshahay”. Xudeyfa ayaa yiri: ” haddaba waxaan ahay Ansaari Rasuulkii Alloow ”.
Markii uu Rasuulka (scw) u haajiray magaalada Madiina, Xudeyfa wuxuu laasimay ka ag-dhowaanshaha Rasuulka (scw), jeer uu Rasuulka kala qayb galo dhammaan duulimaadyadii uu qaaday Rasuulka, markii laga reebo dagaalkii ugu fadli badnaa ee Badr. Ka maqnaashaha Xudeyfa uu ka maqnaaday dagaalka Badr, waxaa ku jirta sheeko uu isagu laf-ahaantiisa ka waramay, wuxuuna yiri: ”igama reebin inaan ka qayb galo dagaalkii Badr, aan ka ahayn inaan anniga iyo aabahay aan ku maqnayn dibadda magaalada Madiina, innagoo dhexda socona ayaa waxaa na qabsaday oo na qafaashay gaaladii Qureysh, waxay nagu yiraahdeen inteed u socotaan, waxaan ku niri: magaalada Madiina. Waxay yiraahdeen, ma waxaad u socotaan Muxammad, waxaan niri: maya, ee waxaan u soconaa magaalada Madiina.
Way diideen inay na sii daayaan, jeer ay naga qaadeen ballan ah inaanan u gaargaaraynin Muxammad oo aanan safkiisa safan dagaalka, sidiina ayeey nagu sii daayeen”. Xudeyfa wuxuu yiri: ”kolkii aan u nimid Rasuulka (scw) ayaa waxaan u sheegnay ballantii aan galnay, iyo wixii aan ka sameyn lahayn”. Rasuulka (scw) wuxuu ku yiri: ”ballantoodu waynu oofinaynaa, Ilaahna waynu kaalmeysanaynaa” ( xaddiiskan waxaa ka danbeesay axaadiis tilmaamaya, inaan la fulinaynin ballamaha la xiriira macaasida Alle iwm, sida xaddiiska oranaya: laguma adeecayo makhluuq wixii macsiyada Eebbe ah).
Maalintii la galayay dagaalkii Uxud, ayaa wuxuu Rasuulka (scw) magacaabay Yamaan iyo saxaabiga la yiraahdo Zaabith Binu Waqsh si ay u galaan dhufeysyada magaalada iyagoo ay weheliyaan dumarka iyo caruurta. Waayo, labadooduba waxay ahaayeen waayeello aad u da’ weyn. Dagaalkii markii uu kululaaday ayaa Yamaan wuxuu Zaabith ku yiri: ”aabo beele! Maxaynu sugaynaa?, wallaahi ayaan ku dhaartaye cumri noo haray ma jiro aan ka ahayn wax labo maalmood oo kale ah, oo muddo yar ka dib waynu dhimanaynaa, kaaley aynu qaadanno seefaheena oo aynu haleelno Rasuulkii Alle (scw) waxaaba dhici karta inuu Alle (sw) nagu arsuqo shahaado innaga iyo Rasuulkuba’e”.
Sidii ayeey ku aadeen goobtii dagaalkii, kuna galeen dagaalka. Zaabith isla markiiba wuxuu Ilaah ku maamuusay shahaado oo wuxuu dhintay isagoo shahiid ah, gaaladii ayaana dishay. Hase ahaatee, Yamaan waxaa isugu tagtey seefihii muslimiinta iyagoo aynan garanayn. Xudeyfa oo arkayay ayaa wuxuu lahaa: ”war waa aabahay, waa aabahay”, laakiin ma jirin cid maqlaysay, sidiina ayuu si sarajoog ahaan ugu dhacay goobtii dagaalka. Xudeyfa ayaa ku yiri nimankii laayey aabihiis oraahdan: "Ilaah ha idiin denbi dhaafo, maxaa yeelay Alle waa kan ugu naxariista badan inta naxariisata”. Rasuulka (scw)wuxuu jeclaystay inuu Xudeyfa siiyo diyadii aabihiis, Xudeyfana wuu ka cudurdaartay inuu qaato diyadaas, isagoo diyada aabihiis ku saddaqeystay muslimiinta, wuxuuna yiri: ” aabahay shahaadadii uu doonayay wuu helay, Ilaahoow ka marag noqo in aan diyadiisa ku sadaqeystay Muslimiinta”.
Caqli qoto dheer oo Rasuulka ku gacan siiya xal-u-helidda wixii adkaado.
Fahmo wadata dhego-nuglaan, taasoo aqbalid badan marka loo yeero.
Sirta oo uu qariyo, oo qof agtiisa wax ka qaadi kara aynan jirin.
Siyaasadda Nebiga (scw) ayaa waxaa ka mid ahayd, inuu nin waliba oo ka mid ah asxaabta uu ku aaddiyo meesha uu ku habboon yahay, iyadoo qof kasta meesha uu ku munaasabsan yahay lala fiirsanayo.
Dhibaatadii ugu waynayd ee soo waajahda Muslimiintii deggenayd magaalada Madiina, ayaa waxay ahayd munaafiqiintiii dhagarta badnayd iyo Yahuuddii degganayd magaalada Madiina iyo xulufaddoodii oo isu bahaystay sidii ay u dhagri lahaayeen Nebiga (scw) iyo asxaabtiisa.
Marar badan ayaa waxaa dhacday inuu Rasuulka (scw) kaalmaystay khibradda iyo kartida Xudeyfa, xilligaas iyada ahna aad loogu baahnaa maskax iyo xeelad dagaal, taasoo ay ku dheehan tahay aqoon iyo caqli hufan, sida tusaale ahaan dagaalkii Khandaq, halkaas oo lagu go’doomiyay muslimiinta iyagoo ay hareereeyeen dhammaan cadowyadii Islaamka. Dhinaca kale, gaaladii qureysh laf-ahaantoodu ma ahayn kuwo ka ka xaalad wanaagsan muslimiinta, maxaa yeelay wuxuu Ilaah ku shubay caradiisa, taasoo tabardarraysay awooddoodii, wiiqdayna go’aankoodii. Wuxuu Ilaah ku soo diray dabeyl xoog leh, dabeyshaasoo geddisay teendhooyinkii ay ku jireen iyo digsiyadii ay wax ku karsanayeen. Sidaa darteed wuxuu Rasuulka (scw) u baahday kartida iyo khibradaha Xudeyfa, isagoo go’aan ku gaaray inuu u diro halka ay joogaan bartamaha halka ay joogaan ciidanka gaalada, weliba isagoo ku gabanaya mugdiga habeenkiisa, waana ka hor intuusan Rasuulka qaadan wax go’aan ah. Haddaba, aan sheekada u dhaafno Xudeyfa si uu nooga waramo safarkii geerida qarka u saarnaa, wuxuuna Xudeyfa yiri: Waxaan habeenkaas ahayn kuwo saf-saf u fadhiya, Abuu Safwaan iyo ciidankii la socday ee Qureysh ahayd waxay taagnaayeen halka naga sareeya.
Munaafiqiintii waxay bilaabeen inay dagaalka ka fasax qaataan, iyagoo Rasuulka (scw) ku leh: "guryaheena ayaa cidla ah oo cadoowgii ayaa soo geli kara". Dhab ahaantiina cidlo ma ahan, ee waxay doonayaan inaynan ka qayb gelin dagaalka. Sidaas oo ay tahay Rasuulka (scw) ruuxii ka fasax qaata wuu ka aqbalayay, iyagoo sidaas munaafiqiinta mid mid u dusaya, jeer ay tiradeena ka noqoto ilaa 300 qof ama wax le’eg. Markay arrintu halkaa mareyso ayaa Rasuulka (scw) istaagay isagoo dhinac maraya asxaabta dhexdooda ilaa uu yimaado anniga agteyda, markaas iyada ahna jirkayga ma saarnayn wax aan ka ahayn go’ ay lahayd xaaskayga, go’aasoo aan dhaafeynin jilbahayga. Rasuulka (scw) wuu ii soo dhowaaday anniga oo dhulka jilba-jooga, isla mar ahaantaana aan waardiyo ka hayo cadoowga, markaasuu Rasuulka (scw) igu yiri: "waa kuma ninkan?", markaasaan ku iri: "waa Xudeyfa". Mar kale ayuu yiri: "ma Xudeyfaa?", anniguna dhulka ayaan isku sii gaabiyay annigoo kahanaya ama dhibsanayo inaan istaago gaajada iyo qaboowga i haya awgeed. Waxaan iri: "haa waa annigii Rasuulkii Alloow".
Markaa ka dib, waxaan u soo noqday Rasuulka (scw) oo tukanaya, wuxuuna Rasuulka (scw) qabayay go’ ay lahayd mid ka mid ah xaasaskii Rasuulka (scw), markii uu i arkayna xaggiisa ayuu ii soo dhoweeyay, waxaana uga waramay wixii aan la kulmay. Nebiga (scw) aad iyo aad ugu farxay, wuxuuna ku mahadiyay Ilaah wuuna ammaanay. Xudeyfa wuxuu ahaa kii lagu sir aaminay siraha munaafiqiinta intii uu noolaa, xitaa khulafada waxay u noqon jireen Xudeyfa sida tusaale ahaan Cumar Binu Khadaab (rc) wuxuu ahaa haddii uu doono inuu ku tukado mid ka mid ah muslimiinta wuxuu weydiin jiray inuu Xudeyfa ku tukaday iyo in kale, haddii lagu yiraahdo: haa, oo wuu ku tukaday, isna wuu ku tukan jiray, haddiise lagu yiraahdo, maya, wuu ka shakin jiray inuu qofkaas ka mid yahay munaafiqiinta, oo ma uusan ku tukan jirin. Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa Cumeyr wuxuu Xudeyfa weydiiyay in shaqaalihiisa ay ku jiraan qaar ka mid ah munaafiqiinta, wuxuuna Xudeyfa u sheegay inuu jiro hal qof, Cumarna wuxuu ka codsaday inuu u sheego, hase ahaatee Xudeyfa wuu diiday inuu sheego ruuxa uu yahay. Xudeyfa wuxuu yiri, wax yar maba uusan sii joogin Cumar ilaa uu ninkii ka casilay markii danbe, sida in lagu hanuuninayay oo kale. Dad aad u yar ayaa og in Xudeyfa Binu Al-yamaani uu muslimiinta u furtay magaalooyinka ay ka midka yihiin Nahawandi, Daynuwr, Hamadaani iyo Warry, wuxuuna sabab u ahaa inuu muslimiinta isugu keeno hal kitaab oo qura (musxafkii Cuthmaan), ka dib markay sigeen inay isku khilaafi lahaayeen kitaabka Alle.
Daabacaad: Sabti July 1, 2000